Tuesday 13 Ashad, 2074 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	नागरिक शनिबार	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
बादलुको घुम्टोमा भेडेटारअसार लागिसक्यो, गर्मी कम हुने छाँट छैन। अर्कोतिर लोडसेडिङको मार। उखरमाउलो गर्मीले न कतै निस्कन मन लाग्छ, न घरमै बसिरहन सकिन्छ। त्यसैले त गर्मी छल्न धरानेहरू भेडेटार पुगिहाल्छन्।	हनुमान नाचमा रमाउँदैबागलुङको न्यु एभरेस्ट एकेडेमी कक्षा आठका विद्यार्थी अभिषेक पौडेल ‰याली बजाउँदै थिए। आर्जन ओझा मृदुंगा (ढोलकी) ठोक्दै थिए। अभिषेक र आर्जनले पनि तालमा ताल मिलाएर बाजा बजाए।	क्यानभासमा रुझेको परिवारराष्ट्रिय मावि कक्षा ८ का विद्यार्थीलाई बर्खे विदाका लागि विज्ञान पढाउने मिसले होमवर्क दिइन्— किताबका सबै चित्र उतारेर ल्याऊ । कतिले ल्याए, कतिले ल्याएनन् । एउटा विद्यार्थीले भने सबै चित्र...	बालुवाटारमा इलियटदुई साताअघिको शनिबार एउटा फोटो पत्रकारका रुपमा मेरा लागि महत्वपूर्ण रहयो। अस्ट्रेलियाली क्रिकेटर फिल ह्युजसको स्मृतिमा भएको सम्मान खेलका लागि हजारौं समर्थक कीर्तिपुरको मैदानमा जम्मा भएका थिए। एक घरेलु खेलदौरान...	नेपाली कला साहित्यमा समयचेतनाकलाको सौन्दर्यशास्त्रले मानिसका अन्य आवश्यकताभन्दा भिन्न तर त्यससँग घनिष्ट रूपमा गाँसिएको मानवीय चेतको आवश्यकतामा जोड दिन्छ। यसले मानिस र उसको समाजलाई वैचारिक जडताबाट मुक्त गर्दै निरन्तर नयाँ मानवीय मूल्य, वैचारिक...	संघर्षशील युवतीको कथामञ्जरी अर्थात्, बोटबिरुवा, लहरा आदिमा पलाएको आँकुरो–मुजुरो वा कोपिला। उपन्यास ‘मञ्जरी' पनि नयाँ फूल वा पालुवाको रूपमा पाठकसमक्ष आएको छ।	झुमाको मुन्धुम संगीतआधारभूत रुपमा नेपाली गीत–संगीत रैथाने लोक संगीत (एथ्नोम्यूजिक) नै हो । परम्परामा 'आधुनिक' वा 'सुगम संगीत' थिएन । मन्दिरमा 'भजन' (भारतको सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा मा...	एसियाकै ठूलो गुफानिस्पट्ट अँध्यारो। गाइड भिमबहादुर थापाले एक मिनेट आँखा बन्द गर्नुस् भन्नु भयो। हामीले टर्चलाइट निभायौं। र, आँखा चिम्म गर्यौं।। कस्तो शान्त वातावरण! नौलो अनुभूति सँगाले मैले।	नागरिक शनिबार	प्रज्ञाको प्रतिष्ठादेशको भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नाटकलगायतका सिर्जनात्मक विधाको विकासका लागि तीनवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान क्रियाशील भए पनि यी...	'म लेखकको शब्दमा बस्छु'एन गोल्डस्टेन अहिले अनुवादको संसारमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी चर्चित नाम हो। एलेना फेरान्टेको 'नियापोलिटन क्वाट्रेट' शृंखलाका...	पानीआलिशालाई कथा सुन्न मन लाग्यो। आामाबाट कथा सुन्न पल्किएकी यो एघार वर्षे फुच्चीले जिद्दी गर्दै भनी,...	मिलान कुन्देराको 'ठट्टा'तपाईंले असाध्यै प्रेम गरेकी केटी १५ वर्षपछि एक्कासि भेटिई भने कस्तो होला? त्यो पनि सैलुनमा तपाईंकै...	भर्खरै...